Gargaarsa Nyaataa - UNHCR Egypt
Gargaarsa WFP argachuuf eenyutu mirga qaba?
Walumaagalatti, gargaarsa WFP argachuuf ulaagaa guutuun adeemsa xiyyeeffannoo kennuutiin kan murtaa’u yoo ta’u, kunis maddoota odeeffannoo hedduu irratti hundaa’a, kunis odeeffannoo yeroo UNHCRtti galmooftan argamu dabalatee, yeroo tokko tokko immoo odeeffannoo af-gaaffii madaallii keessatti walitti qabame.
Murteen kun haala maallaqaa, baay’ina miseensota maatii, gargaarsa biroo argachuuf salphaa ta’uu, fedhii addaa, balaa eegumsaa, haala fayyaa fi wantoota biroo hedduu dabalatee wantoota walitti makaman hedduu ilaala.
Sana booda, dhimmoonni hundi wal bira qabamanii maatii baay’ee saaxilamoo ta’an, kanneen sarara hiyyummaa gadi bu’anii fi balaa eegumsaan walqabateef baay’ee saaxilaman adda baasuudha. Maatii saaxilamoo ta’an kanatu sana booda adda baafamee WFPn deeggaramuudha.
Gargaarsa WFP akkamittan galmaa’uu danda’a?
Baqattoonni gargaarsa nyaataa WFP argachuuf ulaagaa guutan UNHCR (kanneen madaalamanii fi baay’ee saaxilamoo ta’anii adda baafaman) adda baafamanii tarreewwan gargaarsaa WFP waliin qoodamu.
Gargaarsa soorataa dubartoota ulfaa fi hoosisaniif
Haadholiin baqattoota daa’imman umuriin isaanii waggaa 2 gadi ta’e ykn dubartoonni baqattoota ulfaa ta’an gargaarsa soorataa WFP argachuuf galmaa’uu kan danda’an erga iyyannoowwan banamee fuula Feesbuukii WFP irratti maxxanfamee booda (link as irraa argattulink).
Dubartoonni baqattootaa gargaarsa soorataa WFP argachuuf ulaagaa guutanis UNHCR (kanneen madaalamanii fi akka baay’ee saaxilamoo ta’anitti adda baafaman) adda baafamanii tarreewwan gargaarsaa WFP waliin qoodamu.
*Yeroo ammaa gargaarsa soorataa kanaaf iyyanni cufamee jira.
Sagantaa Nyaata Leenjiif jedhuuf
Yeroo argamu, hidhannoon iyyannoo sagantaa Nyaata Leenjiif oolu fuula Feesbuukii WFP irratti beeksifama (link as irraa argattu), karaa Hoggantoota Hawaasaa fi michoota WFP. Baqattootaa fi miseensota hawaasa keessummeessitoota hundaaf iyyannoo banaadha.
Ulaagaaleen filannoo gosa koorsii tokkoon tokkoo isaanii ulaagaa damee ogummaa koorsii ykn leenjii tokkoon tokkoo isaanii wajjin walqabatu irratti hundaa’uun garaagarummaa qabaata.
*Yeroo ammaa iyyanni sagantaa nyaata leenjiif dhiyaatu cufamee jira.
WFP baqattootaaf gargaarsa akkamii kenna?
WFP baqattoota biyya Masrii keessa jiraataniif gargaarsa gosa 3 kenna. Isaanis:
Gargaarsi nyaataa WFP’n baqattootaaf kennu nama tokkoof jijjiirraa maallaqaa yoo ta’u, manneen daldalaa michuu ta’an keessatti ykn maallaqaan bakka gurgurtaa 140,000 ol guutuu biyyattii keessatti karaa kaardii fayyadamaa dhuunfaatiin furuu danda’a.
Gargaarsi kun baqattoota baay’ee saaxilamoo ta’uun isaanii adda baafamaniif ji’a ji’aan kennama (ulaagaa saaxilamummaa ilaalchisee odeeffannoo dabalataa argachuuf ulaagaalee xiyyeeffannoo kennuu ilaalchisee gaaffii 2 ilaali).
Adeemsa furuu ilaalchisee bal’inaan fayyadamtootaaf yeroo gargaarsa kana yeroo jalqabaaf argatan qaamaan fi karaa odeeffannoo quunnamtii isaanii galmaa’ee ni beeksifama.
WFP dubartoota baqattoota ulfaa fi hoosisaniif (daa’imman umuriin isaanii waggaa 2 gadii) ji’a ji’aan jijjiirraa maallaqaa kan kennu yoo ta’u, kunis manneen daldalaa michuu isaaniitti ykn maallaqaan karaa kaardii fayyadamaa dhuunfaatiin bakka gurgurtaa 140,000 ol guutuu biyyattii irraa akka furamuuf ni kenna. Soorata sirrii fi nageenya haadholii gargaaramanii fi daa’imman isaanii xixiqqoo guddisuuf walgahiin hubannoon waa’ee soorataas ni kennama.
Sagantaa Nyaata Leenjiif
WFP hojiiwwan ijaarsa dandamachuu ni kenna, baqattoota saaxilamoo ta’anii fi miseensota hawaasa keessummeessu gidduutti walitti hidhamiinsa hawaasummaa ni jajjabeessa. WFP fi michoonni isaa waliin ta’uun leenjii ogummaa damee hojii adda addaa irratti ni kennu.
Kaayyoon sagantichaa baqattootaa fi miseensonni hawaasa keessummeessituu galii argachuuf ulaagaa fi ragaa barbaachisu akka argatan deeggaruudha.
Hirmaattonni marsaa koorsii ji’aa keessaa %80 yeroo argaman, galii yeroo saganticha irratti hirmaatan keessaa dhiisuu danda’an kamiyyuu bakka bu’uun gargaarsa maallaqaa ji’a ji’aan argatu.
*Haa ta’u malee, sababa hanqina maallaqaatiin, sagantaa nyaata leenjii WFP’n yeroo ammaa hanga maallaqni dabalataa argamutti dhaabbateera. Sagantaan kun erga jalqabamee booda fayyadamtoonni karaa fuula Feesbuukii WFP’n ni beeksifamu (link as irraa argattu), Garee hojii jireenyaa UNHCR fi hoggantoota hawaasa baqattootaa.
WFP Masrii jiru akkamittan qunnamuu danda’a?
WFP waajjira isaaniitti fayyadamtoota fudhachuu hin danda’u. Gaaffii yoo qabaattan lakkoofsa sarara bilbilaa (armaan gaditti) bilbiluu qabdu ykn fuula Facebook WFP (armaan gaditti) ilaaluu qabdu.
Sarara bilbilaa WFP: 02-25299830 / 01023646706 | Lakkoofsa bilbilaa bilisaa: 08005555222
Fuula Feesbuukii WFP gargaarsa baqattootaaf: https://www.facebook.com/WFPassistancetorefugees/
Fuula Feesbuukii irratti WFP akkas jechuun beeksisa:
guyyoota gargaarsi baqattootaa WFP itti furamu
odeeffannoo jijjiirama adeemsa furuu wajjin walqabatee dhufu kamiyyuu
odeeffannoo akkaataa gargaarsa baqattootaa WFP itti furu
iyyannoowwan hojiiwwan gargaarsa baqattootaa WFP adda addaatiif dhiyeessan
hidhannoo gara poortaalota ol’iyyannootti geessu
ergaa sobaa ykn odeeffannoo sobaa irraa akeekkachiisa kennuu
Gargaarsa WFP argachuuf filatamuu koo akkamittan beeka?
Gargaarsa WFP bifa kamiinuu yoo filatamte filannoo fi mirga kee karaa ibsa quunnamtii galmaa’een ni beeksifama.
Akkamitti komii dhiyeessu danda’a?
Komii qabdan kamiyyuu karaa ergaa kallattiin fuula Feesbuukii keenya irratti erguu dandeessu (link as irraa argattu), akkasumas sa’aatii 48 keessatti deebii isiniif kennina.
WFP Baqattootaa fi Koolu galtootaaf vaawucharii nyaataa kennuu itti fufee jiraa?
WFPn baqattootaa fi koolu galtoota saaxilamoo ta’aniif deeggarsa isaa itti fufeera. Gargaarsi keenya hangam barbaachisaa akka ta’ee fi baqattoonni saaxilamoo ta’anii fi koolu galtoonni maatii isaaniif nyaata argachuuf akka irratti hirkatan ni hubanna.
WFP baqattoota tokko tokkoof gargaarsa godhu akka dhaabu dhugaadhaa?
WFP hanqina maallaqaa waan mudateef fayyadamtoota tokko tokko kanneen baay’ee saaxilamoo ta’an keessaa akka hin taaneetti ilaalaman hambisuuf dirqame. Fayyadamtoonni gargaarsa nyaataa isaanii ji’oota sadii walitti aansuun hin baasneefis kan hin baane ta’uu ibsameera. Maallaqa jiru haala gaariin itti fayyadamuu mirkaneessuuf gareewwanii fi gareewwan balaa eegumsaa hamaa mudataniif gargaarsa nyaataa kennuudhaaf dursi kennamaaf.
Gargaarsa WFP argachuuf eenyu akka ta’e akkamitti murteessitu?
Walumaagalatti, gargaarsa nyaataa argachuuf ulaagaa guutuun adeemsa xiyyeeffannoo kennuutiin kan murtaa’u yoo ta’u, kunis maddoota odeeffannoo hedduu irratti hundaa’a, kunis odeeffannoo yeroo UNHCRtti galmooftan argamu dabalatee, yeroo tokko tokko immoo odeeffannoo af-gaaffii madaallii keessatti walitti qabame. Murteen kun haala maallaqaa, baay’ina miseensota maatii, gargaarsa biroo argachuuf salphaa ta’uu, fedhii addaa, balaa eegumsaa, haala fayyaa fi wantoota biroo hedduu dabalatee wantoota walitti makaman hedduu tilmaama keessa galcha. Sana booda, dhimmoonni hundi wal bira qabamee maatii baay’ee saaxilamoo ta’an, kanneen sarara hiyyummaa gadi bu’anii fi kanneen biroo caalaa balaa eegumsaan walqabateef saaxilaman adda baasuuf.
Sagantaan Nyaataa Addunyaa namoota balaaf saaxilamaniif gargaarsa nyaataa kennuu itti fufa.
Dhimmoonni keessaa baafaman kanneen saaxilamoo xiqqaa ta’an, kanneen sarara hiyyummaa ol ta’an, balaa eegumsaa hin mudanne, fi fedhii nyaataa isaanii isa xiqqaa ta’e mirkaneessuu danda’aniidha. Isaanis gamaaggama bal’aa kuusaawwan odeeffannoo bara 2014 irraa eegalee argaman irratti hundaa’uun adda baafamaniiru.
Maatii hanga danda’ametti gargaaruu danda’uuf, WFPn gargaarsa kennamu irratti maatii tokkoof miseensota 5 akka qaban daangaa hojiirra ni oolcha. Miseensonni maatii dabalataa kaardii gargaarsaa irraa ni baafamu. (Fakkeenyaaf maatiin abbaa, haadha fi ijoollee shan of keessaa qabu gargaarsa namoota 5 waliin wal gitu qofa argata.)
Murtii kana karaan ol’iyyannoo itti dhiyeessan jiraa?
Eeyyee. WFPn sirna ol’iyyannoo hojiirra jiru qaba. WFP fi michoonni isaa namoota gargaarsa irraa ala ta’aniin iyyannoo akka dhiyeessan hayyamuuf bu’uuraalee iyyannoo ni diriirsu. Sirnichi irra deebiin madaallii saaxilamummaa maatii ol’iyyannoo fi haala wabii nyaataa dhabuu isaa irratti kan ijaarame yoo ta’u, kunis bu’uura ol’iyyannoo raggaasisuu fi sana booda gargaarsa keessatti irra deebi’amee hammatamuu isaati.
Ol’iyyannoodhaaf Unkaan WFPn qophaa’ee jira. gargaarsa irraa addaan cittanii ol iyyannoo dhiyeessu yoo barbaaddan, maaloo link kana seenuudhaan qajeelfama kenname hordofaa: https://forms.office.com/r/NHRwKvdgiV . Iyyanni Ol’iyyannoo Yeroo Ol’iyyannoo erga beeksifamee booda ji’a lama keessatti dhiyaachuu qaba.
Adeemsi ol’iyyannoo yeroo hangamii fudhata?
Murtiin gara ol’iyyannoo keessaniitti kennamu guyyoota 70 keessatti kan kennamu yoo ta’u, isiniif ni beeksisa.
Bu’aa ol’iyyannoo mormuun ni danda’amaa?
WFP maallaqa dabalataa yoo argate lakkoofsa namoota gargaartan ammas dabalaa jirtuu?
WFP yeroo hunda namoota baay’ee deeggaruuf fedhii guddaa qaba garuu yeroo hunda dhimmoota baay’ee saaxilamoo ta’an sana deeggaruuf kutannoo qabaata. Qabeenya walitti qabuuf itti fufiinsaan hojjechaa kan jirru yoo ta’u, maallaqa dabalataatiin namoota deeggarsa keenya barbaadan hedduu bira ga’uu dandeenya. Haa ta’u malee, WFPn maallaqa dabalataa argachuun isaa tarreewwan gargaarsaa keenya irratti ofumaan deebitee hammatamtu jechuu akka hin taane hubachuun barbaachisaadha.